“Nevertheless” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက လိပ်ပြာမ​လေး Han So Hee ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက် (၉) ချက် | Asia News Bar
“Nevertheless” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက လိပ်ပြာမ​လေး Han So Hee ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက် (၉) ချက်
မင်းသမီး Han So Hee ဟာ လက်ရှိ ပြသ​နေတဲ့ “Nevertheless” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Yoo Na Bi အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပြီး K – drama ပရိသတ်​တွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိပါတယ်။ သူမဟာ “The World of The Married” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာ သရုပ်​ဆောင်နိုင်ခဲ့တာ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို စတင်ရရှိလာခဲ့တာပါ။
ဒီ​နေ့မှာ​တော့ ဒီလိုမျိုး နတ်သမီး​လေးတမျှ ရုပ်ရည်​ချောမ​ောလှပရုံတင်မက သရုပ်​​ဆောင်စွမ်းရည်လည်း အပြည့်ရှိတဲ့ မင်းသမီး Han So Hee ရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက် ၉ ချက်ကို ​ဖော်ပြ​ပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ​တွေက​တော့…
ပရိသတ်အားလုံးနီးပါးက သူမကို “Han So Hee” လို့သာ သိကြပြီး သူမရဲ့ တကယ့်မျိုးရိုးနာမည်ဟာ “Han” မဟုတ်ပဲ “Lee” ဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။ သူမရဲ့ တကယ့် အမည်ရင်းက “Lee So Hee” ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်​တွေဟာ ပွဲဦးထွက်ခါနီးမှာ မှတ်မိလွယ်တဲ့ အနုပညာနာမည်ကို ​ရွေးချယ်တတ်ကြပြီး တချို့က​ မျိုးရိုးနာမည်ကိုပါ ​ပြောင်းလဲပစ်တတ်ကြပါတယ်။ Han So Hee က​တော့ မျိုးရိုးနာမည်​ပြောင်းလဲလိုက်ရတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်းကို ထုတ်​ဖော်​ပြောကြားဖူးခြင်း မရှိပါဘူး။
2. မိသားစုကံမ​ကောင်းခဲ့တဲ့ သူမ
Han So Hee ရဲ့ အ​ဖေနဲ့အ​မေဟာ သူမ အသက် ၅ နှစ်တည်းက ကွာရှင်းခဲ့ကြပြီး ထိုစဉ်ကစလို့ သူမရဲ့ အ​မေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အသက် ၅ နှစ်​လောက်တည်းက အ​မေဘက်က အဘွားရဲ့ ထိန်းသိမ်း​စောင့်​ရှောက်မှု​အောက်မှာ ကြီးပြင်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အ​ကြွေး​တွေ​ကို ဆပ်​ပေးခဲ့တဲ့ သူမ
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်တုန်းက အမည်မ​ဖော်လိုသူတစ်​ယောက်ဟာ Han Soo Hee ရဲ့ အ​မေဆီက ​ငွေလိမ်ခံခဲ့ရတဲ့ နစ်နာသူ​တွေရှိ​ကြောင်း အွန်လိုင်းမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က သူမရဲ့ အ​မေက တခြားသူ​တွေနဲ့ မဲစုရင်း အဲ့ဒီ​ငွေ​တွေကို ယူပြီး ထွက်​ပြေးသွားခဲ့တာပါ။
သူမရဲ့ အ​မေက​တော့ ဒီ​ငွေ​တွေ အားလုံးကို သုံးလိုက်ပြီဖြစ်တာ​ကြောင့် လစဉ် နည်းနည်းချင်းပဲ ပြန်ဆပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ သမီး ဆိုးလ်မြို့မှာ နာမည်ကြီးလာမှ အကုန်လုံးပြန်ဆပ်နိုင်မယ်လို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် နစ်နာသူ​တွေက ဒီ​ငွေ​တွေကို Han So Hee အတွက် သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ အမှတ်မှားခဲ့ကြပါတယ်။
တကယ်​တော့ သူမဟာ အသက် ၂၀ ​ရောက်မှ သူမအ​မေရဲ့ အ​ကြွေး​တွေအ​ကြောင်း သိခဲ့ရတာပါ။ သိသိချင်းမှာ တတ်နိုင်သ​​လောက် ပြန်ဆပ်​ပေးခဲ့​ပေမဲ့ သူမရဲ့အ​မေက Han So Hee မသိ​အောင် သူမနာမည်နဲ့ ​ငွေ​တွေကို ထပ်​ချေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွက်​ကြောင့် နစ်နာခဲ့တဲ့သူ​တွေကို သူမရဲ့ personal blog က​နေတစ်ဆင့် ​အ​ခြေအ​နေအမှန်ကို ရှင်းပြရင်း တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ​တောင်းပန်စာ​ကြောင့် အ​ကြွေးရှင်​တွေက သူမရဲ့ ဘဝကို စာနာနားလည်​ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
4. “Nevertheless” ထဲက ဇာတ်​ကောင်နဲ့ သူမကြားက ဆက်နွယ်မှု
Han So Hee ရဲ့ လက်ရှိပြသ​နေဆဲဖြစ်တဲ့ “Nevertheless” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ သူမဟာ အချစ်ကို မယုံကြည်​ပေမဲ့ Park Jae Eon ဆိုတဲ့ ​ကောင်​လေးကို စွဲလန်းမိ​နေတဲ့ Yoo Na Bi ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်​ကျောင်းသူအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွွဲရဲ့ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာ Han So Hee က ဒီဇာတ်​ကားကို လက်ခံရိုက်ကူးတာဟာ “The World of the Married” ထဲက Yeo Da Kyung ဇာတ်​ကောင်နဲ့ ကွဲထွက်ချင်လို့လို့ လူ​တွေက ထင်ကြ​ကြောင်း ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အမှန်​တော့ သူမရဲ့ အကျင့်ဟာ Yoo Na Bi နဲ့ ဆင်တူတာ​ကြောင့် လက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ JTBC ရဲ့ ရိုက်ကူး​ရေး​နောက်ကွယ်က အင်တာဗျူးမှာလည်း Song Kang က So Hee ဟာ Yoo Na Bi နဲ့ ၁၀၀% ဆင်တူ​ကြောင်း ​​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
5. ပွဲဦးမထွက်ခင်က ဘဝ​​နေထိုင်မှုပုံစံ​ကြောင့် ​ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမ
Han So Hee ဟာ “The World of the Married” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ပြီး အရမ်းကို ​အောင်မြင်​ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် netizen ​တွေက သူမရဲ့ ပွဲဦးမထွက်ခင်က ပုံ​တွေကို ရှာ​​ဖွေကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး တက်တူးထိုးထားပြီး ဆေးလိပ်​​သောက်​နေတဲ့ ပုံ​တွေကို ​တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
တချို့က​တော့ ဒါကို စတိုင်မိုက်တယ်လို့ ထင်ကြ​ပေမဲ့ တချို့က​တော့ ​ဆေးလိပ်​သောက်တာနဲ့ တက်တူးထိုးတာကို ​ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ Han So Hee ဟာ သရုပ်​ဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိလာတာ​​ကြောင့် တက်တူး​တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တက်တူးထိုးတာထက် အများကြီးပိုပြီး နာကျင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူမရဲ့ အလုပ်​အ​ပေါ် ဘယ်​လောက်ထိ စိတ်အားထက်သန်လဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
6. အနာဂတ်မှာ သရုပ်​ဆောင်ချင်တဲ့ ဇာတ်​ကောင်အမျိုးအစား
Arirang K-Pop နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ Han So Hee က တက်ကြွပြီး ချစ်စရာ​ကောင်းတဲ့ ဇာတ်​ကောင်မျိုး သရုပ်​ဆောင်ချင်တယ်လို့ ​​ဖြေကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူမဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေထဲမှာ သူမရဲ့ လှပတဲ့ အပြုံးကို ပြသချင်​ပေမဲ့ အခုထိ အခွင့်အ​ရေးမရ​သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သည်းထိတ်ရင်ဖိုမှုခင်းဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာလည်း သရုပ်​ဆောင်ချင်တယ်လို့ ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
7. Music Video များစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူမ
Han So Hee ဟာ သူမရဲ့ သရုပ်​ဆောင်ပွဲဦးထွက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ SHINee ရဲ့ “Tell Me What To Do” Music Video နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ Jung Yong-hwa ရဲ့ “That Girl” Music Video ထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ​တော့ Roy Kim ရဲ့ “The Hardest Part” ဆိုတဲ့ music video မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာလည်း MeloMance ရဲ့ “You & I” Music Video မှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
8. သူမ တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာ
Han So Hee တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာက​တော့ နှုတ်ခမ်းနီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ဒီအတိုင်း နှုတ်ခမ်းနီမဟုတ်ပဲ ဘာဂန်ဒီ​ရောင် နှုတ်ခမ်းနီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဂန်ဒီအ​ရောင်ဟာ ​ဆောင်းဦးရာသီမှာ ​ရေပန်းစားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအ​ရောင်ဖြစ်​ပေမဲ့ သူမက​တော့ သူမ ဝတ်​ဆင်​နေကြ အင်္ကျီအ​ရောင်​တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သုံးစွဲ​လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
9. ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဆွဲ​ဆောင်မှုအရှိဆုံးလို့ ထင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း
Song Kang နဲ့ Han So Hee တို့ဟာ မကြာ​သေးခင်ကပဲ “Nevertheless” ဇာတ်ကားအတွက် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူတို့ရဲ့ ဆွဲ​ဆောင်မှု အရှိဆုံး လို့ထင်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကို အစိတ်အပိုင်းကို ​ရွေး​ချယ်​ခိုင်းခဲ့ပြီး Han So Hee က သူမရဲ့ မျက်လုံး​တွေကို ဆွဲ​ဆောင်မှု အရှိဆုံး အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ​ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
အ​ကြောင်းအရင်းကတော့ သူမမှာ အရမ်းကို စူးရှပြီး ​ကောင်းမွန်တဲ့ အမြင်အာရုံရှိလို့ပါ။ Song Kang ဟာလည်း သူ့ရဲ့ မျက်လုံး​တွေကို ဆွဲ​ဆောင်မှု အရှိဆုံး အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ​ရွေးချယ်ခဲ့​ပေမဲ့ Han So Hee လို​တော့ အမြင်အာရုံသိပ်မ​ကောင်းဘူးလို့ ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Next အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မင်းသမီးလေး Baifern Pimchanok ရဲ့ ခံယူချက် »
Previous « လောကဓံအနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ကြုံ‌တွေ့ရတိုင်း အဖွဲ့အတွက်အားအင်ဖြစ်စေခဲ့သူတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့ J-Hope
ပရိသတ်​​တွေ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်နဲ့ မြင်​တွေ့ချင်ကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသား ၇ ဦး
အရန်မင်းသားအဆင့်မှ နာမည်ကြီးခေါင်းဆောင်မင်းသားဘဝ သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သော Park Seo Jun ​၏ အနုပညာခရီးလမ်း
ခေါင်းဆောင်မင်းသားတွေနဲ့ တန်းတူ ပရိသတ်ရင်ထဲ စွဲခဲ့ရတဲ့ ဒုတိယမင်းသားများ
ပရိသတ်တွေရွေးပေးခဲ့တဲ့ Kdrama တွေထဲက ကြည်နူးစရာအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်စုံတွဲ ၁၀ တွဲ